dynamic အလင်း Box, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED Strip, LED တင်းကြပ်ဘား - Huayuemei
ဦး ဆောင်သောအလင်းရောင်ဘားများ high power led edge ...
ပစ္စည်း Edge-lit LED Strip Model HB6005A အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် 500 * 26 * 2mm LED အရွယ်အစား SMD3535 LED Qty 6PCS Lumen 120LM / W CRI 80+, စိတ်ကြိုက်အရောင်အသွေး ၆၀၀၀ - ၇၀၀၀ ကီလို၊ စိတ်ကြိုက်ရှုထောင့် ၁၅ မှ ၄၅ ဒီဂရီပါဝါ 12w / pcs Voltage DC24V အခြားအရွယ်အစား 25cm, 3leds; 28cm, 5leds; 36cm, 5leds; 45cm, 5leds; 56cm, 10leds 1. စစ်မှန်သောအရောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသည်အရောင်ပြန်ဆိုခြင်း ၉၀ ထက်သာလွန်သည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်အရဘား spcing နှင့်အရောင်အပူချိန်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ၂ ။
ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - Item RGB Dynamic LED Panel Model HC3002A သတ်မှတ်ချက် 240 * 240 * 1.6mm LED အရွယ်အစား SMD5050 LED Qty 64PCS အရောင်အသွေး RGB View Angle 160 ° Power 36w / pcs Voltage DC24V 1. သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကြော်ငြာကိုယခုတက်ကြွသောကမ္ဘာတွင်သင်၏စွမ်းအားမြှင့်တင်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကြော်ငြာသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်အံ့သြစရာကောင်းသည့်အရာများနှင့်အတူရပ်တည်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ဘတ်ဂျက်ကိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းနှင့်မူရင်းကိုမထိခိုက်စေဘဲပညာရှိစွာအသုံးပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော HYM Dyn ...
ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: ပစ္စည်းရေစိုခံသောကုလားကာ LED Strip Model HA5152A သတ်မှတ်ချက် 277.2 * 16.8 * 1.6mm LED အရွယ်အစား SMD3030 LED Qty 4PCS Lumen 110LM / W CRI 80+, စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်အရောင်အပူချိန် 2800-12000K (စိတ်ကြိုက်) IP Rating IP67 View Angle 160 ° Power 3.6w / pcs Voltage DC24V LED ရာဇမတ်ကွက်နောက်ခံ (LED ကုလားကာ၊ LED ၀ ါးစာရွက်များ); LATTICE LED Matrix Lighting System သည်အိမ်တွင်းနှင့်အပြင်နိမိတ်လက္ခဏာပြပုံးများနှင့်အခန်းများအတွက်စွယ်စုံသုံးခြင်းနှင့်လက်တွေ့ကျသောအလင်းရောင်ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ပစ္စည်းနှစ်ရောင်အရောင်နောက်ခံ LED Panel Panel Model HC1026A အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် 420 * 240 * 0.2mm LED အရွယ်အစား SMD2835 LED Qty 420PCS Lumen 120LM / W CRI 80+, စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည် 2000-2200K & 6300-6800K, စိတ်ကြိုက်ကြည့်ရန်ထောင့် ၁၂၀ ဒီဂရီပါဝါ 0.12 w / LED Voltage DC24V 1.True အရောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသည် ၉၀ အရောင်ပြန်ဆိုခြင်းထက်သာသည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်အရဘား spcing နှင့်အရောင်အပူချိန်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ 2. အရောင်အပူချိန် customi ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ပစ္စည်းအရွယ်အစား LED အရွယ်အစားဗို့အားပါဝါ Lumen HYM-LED-A-30 × 30 300 * 300 * 1.6mm SMD2835 DC24V 27w 120LM / W HYM-LED-B-30 × 30 300 * 100 * 1.6mm SMD2835 DC24V 9w 120LM / W HYM-LED-C-10 × 10 100 * 100 * 1.6mm SMD2835 DC24V 3w 120LM / W 1. စစ်မှန်သောအရောင်မျိုးပွားခြင်းနည်းပညာသည် ၉၀ အရောင်ပြန်ဆိုခြင်းထက်သာလွန်သည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်အရဘား spcing နှင့်အရောင်အပူချိန်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ၂။ တင်သွင်းသည့် Optical grade PMMA ပစ္စည်း (လုံခြုံပြီးစလင်း၊ ယူနီဖောင်းအလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ တောက်ပသောဗွီဒီယိုဆန့်ကျင်ခြင်း ... )
24v အလင်း panel ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ပစ္စည်းအရွယ်အစား LED အရွယ်အစားဗို့အားပါဝါ Lumen HYM-LED-I-30 × 30 300 * 300 * 1.6mm SMD2835 DC24V 13.44w 120LM / W HYM-LED-II-30 × 7.5 300 * 75 * 1.6mm SMD2835 DC24V 3.36 w 120LM / W HYM-LED-III-30 × 7.5 300 * 75 * 1.6mm SMD2835 DC24V 3.36w 120LM / W HYM-LED-IV-30 × 7.5 300 * 75 * 1.6mm SMD2835 DC24V 3.36w 120LM / W HYM- LED-V-7.5 × 7.5 75 * 75 * 1.6mm SMD2835 DC24V 0.86w 120LM / W HYM-LED-VI-7.5 × 7.5 75 * 75 * 1.6mm SMD2835 DC24V 0.86w 120LM / W 1. စစ်မှန်သောအရောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာသည်သာလွန်သည်။ ထို့နောက်အရောင် 90 ပွင့်သည် ...
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ပစ္စည်းအရွယ်အစား LED အရွယ်အစားဗို့အားပါဝါ Lumen HYM-LED-A-30 × 30 300 * 300 * 1.6mm SMD2835 DC24V 27w 120LM / W HYM-LED-B-30 × 30 300 * 100 * 1.6mm SMD2835 DC24V 9w 120LM / W HYM-LED-C-10 × 10 100 * 100 * ၁.၆ မီလီမီတာ SMD2835 DC24V 3w 120LM / W 1. ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်အရောင်အပူချိန်မှာ ၆၀၀၀-၆၅၀၀K၊ အဖြူရောင်အရောင်ရှိသော LED အရောင် 2.IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် IP20 3. အလေးချိန်ပါဝင်ပစ္စည်းများပါဝင်သည် အနိမ့်ရေကြောင်းကုန်ကျစရိတ်ရန်။ နာရီပေါင်း ၅၀၀၀၀ ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ 5.Color အပူချိန်၊ CRI၊ သင့်အနေဖြင့် ... \_ t
24V dc သည်ပါးလွှာသော LED မီးအလင်းရောင်အတွက် ...
ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: Item တင်းကြပ်သော LED မီးကြိုးပုံစံ HD1026A သတ်မှတ်ချက် 500 * 7.8 * 0.2mm LED အရွယ်အစား SMD2835 LED Qty 42PCS Lumen 130LM / W အရောင်အပူချိန် 2800-12000K (စိတ်ကြိုက်) ကြည့်ရှုထောင့် 120 ° Voltage DC24V ခိုင်မာသော LED အလင်း, Strip light bar နှင့် Aluminium rigid မိုးလုံလေလုံအလင်းရောင်အတွက်အလင်းပစ္စည်း 24Volt တင်းကျပ်သော LED အလင်းအရက်ဆိုင်များနှင့်ထောင့်ပေါင်းစုံအသုံးပြုရန်အတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည့် Aluminum light bars မ်ား။ အရည်အသွေးမြင့်၊ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်၊ အလင်းရောင်ပြင်းထန်မှု၊ သက်တမ်းရှည်ခြင်း၊ အပူနည်းသောအလင်းရောင်အစရှိသည်တို့ဖြစ်သည်။ သင့်လျော်သော ...
ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: Item Lattice LED Strip Model HA5100C သတ်မှတ်ချက် 580 * 16.8 * 1.6mm LED အရွယ်အစား SMD3030 LED Qty 8PCS Lumen 110LM / W CRI 80+, စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်အရောင်အပူချိန် 6000-7000K, စိတ်ကြိုက်ကြည့်ရန်ထောင့် 160 °ပါဝါ 7.2w / pcs ဗို့အား DC24V အခြားအရွယ်အစား ၅၈ စင်တီမီတာနှင့် ၈ လက်မ၊ ၅၆ စင်တီမီတာနှင့် ၆ လက်နှစ်များကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အလင်းရောင်၏အလင်းရောင်ကိုသင့်အားထိန်းချုပ်နိုင်သည့်မှိန်မှိန်အလင်းရောင်အစင်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက်သင်၏အလင်းကိုအမြင့်ဆုံးဖြစ်စေလိုသလား
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ် Dimmable ခလုတ်များစျေးကွက်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိသောအခါ၎င်းတို့သည်အမြင်အာရုံအတွက်သာအလင်းရောင်ကိုမှိန်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအတွေးသည် ဦး စားပေးကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ဒီရုပ်သံလိုင်းငါးလိုင်းပါရှိသည့် dimmer အမျိုးအစားသည် RGB + CW ကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်စေရန်သင်၏လိုအပ်ချက်အနေဖြင့်။ Huayuemei Lighting သည် dimmer switch ကိုတပ်ဆင်ရာတွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ သင်၏သင်၏အလင်းရောင်နှင့်လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းများအားလုံးကို professional နှင့် ...
ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: ပစ္စည်းမာကျောသော LED မီးကြိုးပုံစံ HD1104A အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် ၅၀၀ * ၅ * ၁.၆ မီလီမီတာအရွယ်အစား SMD5050 LED ကွပ်မျက်နိုင်သည့် ၃၆PCS Lumen 130LM / W အရောင်တည်ငြိမ်မှု 2800-12000K (စိတ်ကြိုက်) ကြည့်ရန်ထောင့် ၁၂၀ ဒီဂရီဗို့အား DC12V 1. မြင့်မားသောတောက်ပမှု၊ မြင့်မားသောတောက်ပမှု SMD2835 အဖြစ် အလင်းအရင်းအမြစ်များ။ ၂။ ကောင်းစွာဓါတ်ရောင်ခြည်များ၊ PCB ဘုတ်များနှင့် Out shell များ၊ အားလုံးသည် Aluminum ပစ္စည်းများသို့မဟုတ် FR-4 ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအပူနည်းပြီးထွက်ရှိမှုလွယ်ကူသည်။ ၃။ စွမ်းအင်နိမ့်။ အလင်းလျော့နည်းခြင်း - သင့်အတွက်စွမ်းအင်ချွေတာမှုသည် ၉၀% အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ 4. ဓါတ်ရောင်ခြည်မရှိဘဲ ...
မြင့်မားသောတောက်ပသောမြင့်မားသောအလင်းရောင်အရိပ်သည်အလင်းအားဖြင့်5...
ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: ပစ္စည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ် LED Strip Model HE1019A အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် 500 * 8 * 0.2mm LED အရွယ်အစား SMD2835 LED Qty 30PCS Lumen 130LM / W CRI 80+, စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ အရောင်တည်ငြိမ်မှု 2800-12000K, စိတ်ကြိုက်ကြည့်ရန်ထောင့် 120 °ပါဝါ 3.9w / pcs ဗို့အား DC12V LED light tape သည်အလင်းလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန် wattages များစွာဖြင့်ကမ်းလှမ်းထားသည်။ အပြင်အဖြူရောင်， အပြင် CCT နှင့် RGB ရွေးချယ်မှုများတွင်လည်းရနိုင်သည်။ အသုံးပြုရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့် ...
ကုလားကာသည်အလင်းရောင် 24v dc module IC ကိုမိုးလုံလေလုံအတွက် ...
ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: Item Curtain LED Strip Model HA5126A သတ်မှတ်ချက် 500 * 16.8 * 1.6mm LED အရွယ်အစား SMD3030 LED Qty 6PCS Lumen 110LM / W CRI 80+, စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ 2800-12000K (စိတ်ကြိုက်) View Angle 160 ° Power 5.4w / pcs Voltage DC24V 1.Color အပူချိန်၊ CRI၊ အရွယ်အစားသည်သင်၏တောင်းဆိုချက်အရစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။ 6.It ကို Controller ကို သုံး၍ ရနိုင်သည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်အရ OEM & ODM ကိုလက်ခံပါသည်။ ၃။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးအကောင်းဆုံး ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ။
3030 ရာဇမတ်ကွက်ချွတ် ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
ကုန်ပစ္စည်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ: Item Curtain LED Strip Model HA5126A သတ်မှတ်ချက် 500 * 16.8 * 1.6mm LED အရွယ်အစား SMD3030 LED Qty 6PCS Lumen 110LM / W CRI 80+, စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ 2800-12000K (စိတ်ကြိုက်) View Angle 160 ° Power 5.4w / pcs Voltage DC24V SUBSTRATE FREE Curtain LED Strip သည်အကောင်းဆုံးယူနီဖောင်းအလင်းရောင်အတွက်ပေါင် ၅၀၀ အထိရိုးရှင်းသော point-to-point အလွှာကိုလွတ်လပ်စွာညှိနှိုင်းပေးသည် UNIFORM LIGHTING / ENERGY EFFICIENT ကုလားကာ LED Strip သည်ယူနီဖောင်းအလင်းရောင်မှ ...
diffus မှန်ဘီလူးနှင့်အတူ 2835 ဦး ဆောင်သော backlight ကို panel ကို
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်: ပစ္စည်းအရွယ်အစား LED အရွယ်အစားဗို့အားပါဝါ Lumen HYM-LED-A-30 × 30 300 * 300 * 1.6mm SMD2835 DC24V 27w 120LM / W HYM-LED-B-30 × 30 300 * 100 * 1.6mm SMD2835 DC24V 9w 120LM / W HYM-LED-C-10 × 10 100 * 100 * 1.6mm SMD2835 DC24V 3w 120LM / W 1. စစ်မှန်သောအရောင်မျိုးပွားခြင်းနည်းပညာသည် ၉၀ အရောင်ပြန်ဆိုခြင်းထက်သာလွန်သည်။ သင်၏တောင်းဆိုချက်အရဘား spcing နှင့်အရောင်အပူချိန်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ၂။ တင်သွင်းသည့် Optical grade PMMA ပစ္စည်း (လုံခြုံပြီးစလင်း၊ ယူနီဖောင်းအလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ တောက်ပသောဗွီဒီယိုဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ... )
C-star - လက်လီအရောင်းအဝယ်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးရှန်ဟိုင်း၏အဖြေများနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအတွက်နိုင်ငံတကာကုန်စည်ပြပွဲ ...
ထုတ်ကုန်အသစ် RGB Dynamic Curtain L ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်ကုန်အသစ်နှစ်မျိုးကိုတွန်းအားပေးနေသည် - Dynamic Curtain RGB LED Strip & Dynamic RGB LED Module အဆောက်အ ဦး တိုင်းတယ်လီဖုန်း ...